ဒီအချက်ကိုသိပြီးသွားရင် သင့်ရဲ့ Game of Thrones ကြည့်ရတဲ့ခံစားချက်က အရင်နဲ့တူတော့မှာမဟုတ်ပါ - MoviesFan
ဒီအချက်ကိုသိပြီးသွားရင် သင့်ရဲ့ Game of Thrones ကြည့်ရတဲ့ခံစားချက်က အရင်နဲ့တူတော့မှာမဟုတ်ပါ
Game of Thrones ထဲက နဂါးကြီး Drogon၊ မြင်သူကျောချမ်းသွားရလောက်တဲ့ Drogon၊ အသံကြားလိုက်တာနဲ့ ဖိန့်ဖိန့်တုန်သွားရလောက်အောင် ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ Drogon.. အဲဒီ Drogon ရဲ့အသံကို ဘယ်လိုဖန်တီးခဲ့တယ်ဆိုတာကို Game of Thrones ရဲ့ sound designer ဖြစ်သူ Paula Fairfield က WNYC ရဲ့ Radiolab အစီအစဉ်မှာထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Sound Designer တွေအနေနဲ့ ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာပါဝင်တဲ့အသံတွေကို ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်တွေ့နေကျအရာဝတ္ထုတွေကနေ ပေါင်းစပ်ပြီးဖန်တီးယူကြတယ်ဆိုတာ ရုပ်ရှင်နဲ့အလှမ်းမဝေးသူတိုင်းသိကြတဲ့ အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နဂါးကြီး Drogon ရဲ့ထိတ်လန့်ဖွယ်အသံကိုဖန်တီးရာမှာ Paula Fairfield က တော်ရုံလူ မစဉ်းစားမိတဲ့နေရာကနေ ရယူဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ သူမဟာ လိပ်ကြီး ၂ ကောင်မိတ်လိုက်နေစဉ်ထွက်တဲ့အသံကိုအခြေခံပြီး Drogon ရဲ့အသံကို ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ Game of Thrones ကြည့်နေစဉ် Drogon ရဲ့အသံကိုကြားရင် အဲဒါလိပ်ကြီးနှစ်ကောင် ဟိုဒင်းဟိုဝှာလုပ်နေကြတဲ့အသံပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘာလို့ဒီလိုပြုလုပ်ခဲ့ရတာလဲဆိုတာကို Paula Fairfield က အောက်ပါအတိုင်း ရှင်းလင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ် –
“ကျွန်မက ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့စရိုက်ပေါ်မူတည်ပြီး သင့်တော်တဲ့အသံတွေကို အသုံးပြုပါတယ်။ Daenerys ဟာ Drogon ကို သူမရဲ့ကွယ်လွန်သွားတဲ့ယောင်္ကျား Khal Drogo ကိုရည်စူးပြီး အမည်ပေးထားတော့ အဲဒီနဂါးဟာ သူမရဲ့ချစ်သူသဘောမျိုးသက်ရောက်သွားပါတယ်။”
I have sounds I might choose simply by certain personality traits that I want to put forward. So in the case of Drogon—she named that dragon after Khal Drogo, her hot, late husband—and so Drogon is like her lover. He’s whistling at her all the time, he’s looking at her butt and going ‘ooh, baby.’ Gizmodo
Paula Fairfield ဟာ Drogon နဲ့ Daenerys တို့ကြားက ရင်းနှီးမှု၊ ချစ်သူ ၂ ယောက်ကြားကရင်းနှီးမှုကိုဖော်ကျူးတဲ့အနေနဲ့ လိပ်ကြီး ၂ ကောင်မိတ်လိုက်နေတဲ့အသံကို အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကလိပ်အထီးကြီးရဲ့အသံကို studio ထဲမှာ ဟိုပြင်ဒီပြင်လုပ်ပြီးနောက် ထွက်ရှိလာတာကတော့ Game of Thrones ရုပ်ရှင်ကြည့်စဉ်ကြားရတဲ့ နဂါးကြီး Drogon ရဲ့အသံပဲဖြစ်ပါတယ်။
Paula Fairfield ရဲ့ WNYC ရဲ့ အင်တာဗျူးကို ဒီနေရာ မှာ သွားရောက်နားထောင်နိုင်ပါတယ်။ Drogon ရယ် လိပ်တွေရယ်အကြောင်းကို မိနစ် ၂၀ အမှတ်လောက်မှာ သွားရောက်နားထောင်နိုင်ပါတယ်။
ကဲ.. သေချာတာကတော့ ဒီစာဖတ်ပြီးတဲ့နောက် Game of Thrones ကြည့်လို့ Drogon ရဲ့အသံကြားမိရင် အနည်းနဲ့အများတော့ ပြုံးမိကြမှာပါ။ အောက်မှာပြထားတဲ့ ဗီဒီယိုမှာ လိပ်ကြီး ၂ ကောင်ရဲ့အသံ.. oops.. Drogon ရဲ့အသံကို သွားနားထောင်ကြည့်လိုက်ကြပါဦး။ ✌️
Previous Post: အမှန်အကန်မျက်နှာပြောင်တဲ့ Kylo Ren Challenge
Next Post: Shinkai Makoto ရဲ့ ‘Your Name’ ပရိသတ်တွေအတွက် Challenge